Cristiano Ronaldo oo gaaray darajo uusan abid gaarin ciyaaryahan kubadda cagta ciyaara…(Waxa uu ku garaacay Lionel Messi) – Gool FM
Haaruun June 6, 2020
(Italy) 06 Juun 2020. Weeraryahanka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horreeyay ee ciyaara kubadda cagta kaasoo soo xareeyay lacag gaareysa Hal bilyan oo Dollar, isagoo kaga hor maray xiddiga ay xafiiltamaan ee Lionel Messi.
Ronaldo ayaa helay 105 milyan oo Doollar ka hor canshuurta iyo qarashaadka uu galay 2019, waxaana uu ku gaaray darajada Bilyanneer.
sida laga soo xiganayo majaladda Forbes ee ka faalloota dhaqaalaha, kabtanka Portugal ayaa kubadda cagta ka soo xareeyay 650 milyan oo doollar muddo 17-sano ah oo uu ku xammaalanayay xirfadda kubadda cagta.
Waxaa la rajeynayaa in lacagta uu mushaar ahaan u helay xirfaddiisa ay gaarto 765 milyan oo doollar marka uu dhammaado heshiiska uu hadda kula jiro Bianconeri ee dhici doona 2022, iyadoo aanan lagu darin lacagaha uu ka helay heshiisyada xayeysiimaha ee uu kula jiro shirkadaha kala duwan ee ganacsiga.
Dhanka kale, Lionel Messi ayaa Barcelona mushahahar ahaan kaga helay 605 milyan oo doollar inkastoo uu saddex sano kaga dambeeyay billaabista kubadda cagta heerka rasmiga ah ama kooxda waaweyn.
Xiddiga Golf-ka ciyaara ee Tiger Woods iyo Feeryahanka Floyd Mayweather ayaa horraan noqday xiddigo gaaray darajada Hal bilyan oo euro, balse CR7 wuxuu noqday xiddigii ugu horreeyay ee ka tirsan ciyaaraha kooxaha loo ciyaaro kaasoo gaara darajada Bilyanneer.
Waa kuwee shaqsiyaadka ku dadaalay in Timo Werner uu u aqbalo ku biirista Chelsea... (Safarkii qarsoonaa ee halyeeyada Blues)